फ्लोरेन तथ्य - तत्वहरूको आवधिक तालिका
फ्लोरेन रासायनिक र शारीरिक गुण
परमाणु वजन : 18.9998403
डिस्कवरी: हेनरी मसान 1886 (फ्रान्स)
इलेक्ट्रोन कन्फिगरेसन : [हे]2से22 प 5
शब्द मूल: ल्याटिन र फ्रान्सेली फ्लूरी : प्रवाह वा प्रवाह
गुण: फ्लोरेन -219.62 डिग्री सेल्सियस (1 एटीएम), उबलते बिन्दु -188.14 डिग्री सेल्सियस (1 एटीएम), 1.696 ग्राम /0डिग्री (0 डिग्री सेल्सियस, 1 एटीएम) घनत्व, 1908 को तरल को विशिष्ट गुरुत्व यसको उबलते बिन्दुमा , र 1 को मूल्य । फ्लोरेन एक संक्षारक पीला पहेंलो ग्याँस हो।
यो अत्यधिक प्रतिक्रियाशील छ, वास्तवमा सबै जैविक र अकार्बनिक पदार्थहरु संग प्रतिक्रियाहरु मा भाग लिन्छ। फ्लोरेइन सबैभन्दा इलेक्ट्रोनटिक तत्व हो । धातु, काँच, सिरेमिक्स, कार्बन, र पानीले फ्लोरेनमा उज्ज्वल ज्वालाको साथ जलाइदिनेछ। यो सम्भव छ कि फ्लोरिइन कार्बनिक प्रतिक्रियाहरु मा हाइड्रोजन को लागि विकल्प ले सकते हो। फ्लोरेइनलाई दुर्लभ ग्याँसहरूसँग बनाइन्छ, जसमा एक्सेनन , रेडोन, र क्रीप्टोप पनि हुन्छ। नि: शुल्क फ्लोरेरीमा एक विशेषता भित्री गंध छ, सावधानीमा पत्ता लगाउँछन् जुन 20 पीपीब कम हुन्छ। दुवै मौलिक फ्लोरेइन र फ्लोराइड आयन अत्यधिक विषाक्त हुन्छन्। दैनिक 8-घण्टाको समय-भारित प्रदर्शनको लागि सिफारिस गरिएको अधिकतम स्वीकार्य एकाग्रता 0.1 पीएमपी छ।
प्रयोग गर्दछ: फ्लोरेइन र यसको यौगिकों यूरेनियम उत्पादन मा प्रयोग गरिन्छ। फ्लोरोकोलोरोहाइड्रोरोबन्स प्रशीतन अनुप्रयोगहरूमा प्रयोग गरिन्छ। फ्लोरेइन धेरै उच्च तापमान प्लास्टिक सहित धेरै रसायन उत्पादन गर्न प्रयोग गरिन्छ।2पीपीएमको स्तरमा खानेपानीमा सोडियम फ्लोरोइडको उपस्थितिले दाँत, कंकाल फ्लूरोसिसमा मोटे भएका इनामेल हुन सक्छ र क्यान्सर र अन्य रोगहरूसँग सम्बद्ध हुन सक्छ।
तथापि, मुख्य रूप देखि फ्लोराइड (टूथपेस्ट, दन्त रिन्स) लागू गरिएको छ दन्त चिकित्सकहरुलाई कम गर्न मद्दत गर्न।
स्रोतहरू: फ्लोरेइन फ्लोरप्रे (CaF) र क्रिस्टल (ना2ए.ए.6) हुन्छ र व्यापक रूपमा अन्य खनिजहरूमा वितरण गरिन्छ। यो पारदर्शी fluorspar वा धातु को कन्टेनर मा anhydrous हाइड्रोजन फ्लोराइड मा पोटेशियम हाइड्रोजन फ्लोराइड को एक समाधान electrolyzing द्वारा प्राप्त छ।
आइसोटोज : फ्लोरेइनसँग एफ -15 देखि एफ -31 सम्मको 17 ज्ञात एकोहोरो छ। एफ-1 फ्लोरेनको मात्र स्थिर र सबैभन्दा साधारण आइसोटोप हो।
घनत्व (जी / सीसी): 1.108 (@ -189 डिग्री सेल्सियस)
रूपान्तरण: हरियो-पहेंलो, पन्चन्ट, संक्षारक ग्यास
परमाणु मात्रा (सीसी / mol): 17.1
कोलोलेड रेडियो (pm): 72
ईनिक रेडियो : 133 (-1e)
विशिष्ट ताप (@ 20 डिग्री CJ / g मोल): 0.824 (एफएफ)
फ्यूजन ताप (केजे / mol): 0.51 (एफएफ)
वाष्पीकरण ताप (केजी / मोल): 6.54 (एफएफ)
पॉलिंग नगरीता संख्या: 3.98
पहिलो आयोनिजिंग एनर्जी (केजे / mol): 1680.0
अक्सिजन राज्य : -1
ल्याटिस संरचना: मोनोकलिनिक
सीएएस रजिस्ट्री नम्बर : 7782-41-4
खनिज फ्लोरोइट को रूप मा फ्लोरेन 1500 अक्टोबर मा अयस्क मुर्दा मा सहायता को लागि प्रयोग भएको थियो।
फ्लोरिइन 1810 को समयको रूपमा एक तत्वको लागी शंकास्पद भएको थियो तर 1886 सम्म सफलतापूर्वक पृथक भएन। तत्वलाई अलग गर्न को लागी धेरै चीजकर्ताहरूले अन्धकार गरे वा हिंसात्मक प्रतिक्रियाहरुबाट सामान्यतया फ्लोरोइन ग्याँस संग मारे।
हेनरी मसानले रसायन विज्ञानमा 1906 नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेकी थिइन् कि अन्ततः सफलतापूर्वक फ्लोरेन (र बिजुली आर्ट भट्टिको आविष्कार) को अलग गर्न।
फ्लोरेन पृथ्वीको कुरकुरामा 13 औं सबैभन्दा सामान्य तत्व हो।
सन्दर्भ: लस एलामोस नेशनल प्रयोगशाला (2001), क्रिसमस रासायनिक कम्पनी (2001), लेंज ह्यान्डबुक ऑफ रसायनशास्त्र (1952), रसायन विज्ञान र भौतिकीको सीआरसी पुस्तिका (18 औं संस्करण) सन्दर्भ: अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा एजेन्ट एनएसएसडीएफ डाटाबेस (अक्टोबर 2010)
10 कार्बन तथ्यहरू
तत्व समूहको आवधिक तालिका
तत्व अन्वेषण टाइमलाइन
नियोडियमियम तथ्य - एन डी वा तत्व 60
जुनसुकै AFOL बिल्डरको लागि लेगो उपहारहरू
Valoir le coup - तपाईं को कूपन ले
7 aportaciones de los स्पेन (latinos) एक संयुक्त राज्य अमेरिका
मेनलो पार्क के थियो?
नेस्ट्रादामामस ने 2012 मा विश्वको अन्त्यको अनुमान गरे?
मीठा बिरार कलेज प्रवेश
घरको कसरी क्रिस्टल सुरक्षित राख्ने
10 सामान्य त्रुटि इटालियन प्रयोगमा: इटालियन व्याकरण गल्ती
फ्लोरिडा अटलांटिक विश्वविद्यालय (एफएयू) प्रवेश
शान्ति बोटहरू युटपपियन आशाहरूलाई आवाज दिनुहोस्
पुरातत्वमा फ्लोोटेशन विधि
जेम्स मोनरो ट्रटोटर
स्टीवन वुन्डरको 35 औं वर्षगायतका राजा डीसी रैलीको लागि राजा छुट्टी
किन मस्तिष्क मस्तिष्क कहिले काँही हुन्छ?
केक बिग शेलल्स मा सुउनी नदी मा
डे मोर्गनको कानून के हो?
ख्रीष्टको न्याय के हो?